Pomubhedha Leukocyte rutapudzo Filter - China Shandong Zhongbaokang Medical
Pomubhedha Leukocyte rutapudzo Filter
Supply kugona: 5,000 anogadza pazuva
Our Leukocyte Removal Filter s (parutivi pomubhedha) akagadzirirwa kubvisa leukocytes uye Micro-uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. muropa uye kudzivirira varwere kubva leukocyte-chokuita ropa yematambudziko akadai GVHD zvirwere uye nenjodzi etc.
Residual WBC verenga zvishoma than≤1.0 × 106 / chikwata
High RBC kupora rate≥90%
100% nokubviswa Micro-aggregates
It rine pre-filtration, Sefa, ivo mapaipi, mhepo firita.
1.Pre-filtration huchabvisa Micro-uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. muropa, uye kudzivisa sefuro kupinda huru firita
2.The Sefa ndicho chinoumba chikamu umo leukocytes inogona yakasvinwa uye kunyura.
3.The mapaipi ine ari yesaline Mapaipi uye neropa Mapaipi. By rokudiridza mapaipi pamwe yesaline pashure filtration, tsvuku masero eropa ari mapaipi zvinogona akapora kwazvo.
4. Air Filter kuchaita kudzivisa inoramba kupinda firita Kit.
Previous: Soft Shell Leukocyte rutapudzo Filter
Next: Medical Virus basa midziyo For Plasma
Parutivi Leukocyte Filter
Disposable Leukocyte rutapudzo Filter Medical
Leuko rutapudzo Filter
Leukocyte rutapudzo Filter (pomubhedha)
Leukocyte rutapudzo Filter (Hard Shell)
Leukocyte rutapudzo Filter (Soft Shell)
Leukocyte rutapudzo Filter Fot pomubhedha Use
Leukocyte rutapudzo Filter Medical
Leukocyte rutapudzo Filter Set
Leukocyte rutapudzo Filter Set (Blood Bank)
Leukocyte rutapudzo filters
Leukocytes kuparadzwa filters
Medical Leukocyte rutapudzo Filter
Medical Leukocyte rutapudzo filters